မိန်းကလေးများသည်လိင်တံတွင် ၄ င်းတို့၏အလံအနီရောင် ၄၁ လုံးကိုမျှဝေပြီးသင့်အားတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေလိမ့်မည် - သတင်း
မိန်းကလေးများသည်လိင်တံတွင် ၄ င်းတို့၏အလံအနီရောင် ၄၁ လုံးကိုမျှဝေပြီးသင့်အားတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေလိမ့်မည်
မင်းကသူ့ကိုချိန်းတွေ့တဲ့ app တစ်ခုကနေတွေ့ရုံတင်မကဘူး၊ အားလုံးကောင်းနေပြီ၊ မင်းက '' ဟုတ်ပြီငါသူ့ကိုထပ်တွေ့ ဦး မယ် '' သင်စဉ်းစားနေပြီ။ ထိုအခါမူကားသူသည်သွားကာသင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းနှိုးစက်ကိုဖြစ်စေသည့်အရာတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်သည်။ ယခုမှာသင်သည်စဉ်းစားနိုင်သမျှယောက်ျားတစ်ယောက်သည်သင်၏လက်ကိုသူ၏ကောင်းကျိုးအတွက်မည်သို့ဆွဲဆောင်ပြီးနောက်ဆုံးကြိုးစားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် သငျသညျ ick တယ် , ဆာဟာရသဲကန္တာရထက်ခြောက်သွေ့ဖြစ်လာ။ ကောင်းတယ် ယခုသင်၏ရန်ပွဲသို့မဟုတ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်တုန့်ပြန်မှုသည်အရှိန်မြှင့်လာပြီ ဖြစ်၍ သင်ကူရန်အသင့်ဖြစ်နေပြီ
ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၌ ဦး စားပေးမှုများရှိသည်။ ထိုနည်းတူစွာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင် 'ဒီရက်စွဲကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါ' ဟုပြောသောအလံနီများရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကသူတို့အလံနီတွေဆိုတာဘာလဲမိန်းကလေးတွေကိုဖြောင့်ဖြောင့်တန်းမေးခဲ့တယ်။
မင်္ဂလာပါ urm ငါရှိရဲ့ KNOW ။ ငါကရချင်တဲ့အခါငါကရမယ့်တာပါ။
၅။ အခြားသော exes အားလုံးကိုအရူး၊ စိတ်၊ စိတ်၊ စိတ်၊ Fucking အရူး၊
yeah ငါသင်၏သင်၏ exes အားလုံးသင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှားအားဖြင့်နည်းနည်းခွေးသို့လှည့်တကယ်သေချာပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဆုံးဆီသို့ ဦး တည်နေတဲ့ twat တစ်နည်းနည်းဖြစ်ကြောင်းပိုင်ဆိုင်တယ်။
၆။ အကယ်၍ သူသည်သင်၏ပထမဆုံးနေ့၌သင်၏လက်ကိုကိုင်ထားလျှင်
မင်း မထားပါနဲ့ သိတယ် ငါ ငါတို့ပြီးပြီ ရုံ။ တွေ့ဆုံခဲ့
သင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်တွေ့သည့်အခါမည်သည့်အသက်အရွယ်အပျိုစင်ဘဝကိုပျောက်ဆုံးသွားကြောင်းသင့်အားပြောပြပါက (စကားပြောဆိုမှုသည်၎င်းနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ)
ဒါဟာယခုငါအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများကနေ) ငါအခမဲ့ခ) ခစဉ်းစားရန်နည်းနည်းရောငျ့ရဲပါပဲ။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာချိုင်းထောက်ဖြစ်ရန်အဆင်သင့်လုပ်ပါ !!!
သုံးနာရီကြာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ကသူတို့ပထမ ဦး ဆုံးသူနာပြုနေတုန်းသင်ခုနစ်ဂျင်နှင့်လုပ်သူများသောက်ပါတယ်။ သူတို့ဟာရပ်ဂ်ဘီယောက်ျားလေးများနှင့်လုံးလုံးလျားလျားသေနိုင်သည့်အချိန်တွင်သူတို့ဘဝ၏အခန်း ၃၈ တွင်ရှိနေသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအားနည်းသူတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်သင်၏အချိန်ဖြုန်းတီး။ သူတို့ရဲ့ဆင်ခြေဟာသူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးဒါမှမဟုတ်သူတို့သိပ်မကောင်းဘူးလို့ပြောခဲ့တာနဲ့တူလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကပဲတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီးသူတို့မပျော်ဘူးလို့ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ တစ်ခုခုကိုလမ်းကအားလုံးကိုဆင်ခြေပါပဲ။
ငါ IT ရတယ်။ မင်းအဲဒီလိုလုပ်ချင်တာကိုငါသိတယ်၊ မင်းငါ့ကိုပြောပြဖို့မလိုဘူး။
12. သူသည် US ရုံးကိုအဘယ်ကြောင့်နှစ်သက်သည်၊ ၎င်းသည်ရုပ်မြင်သံကြားတွင်အဘယ်ကြောင့်အကောင်းဆုံးပြသခြင်းကိုရှင်းပြခြင်း
အရသာရှိတဲ့! ပိုဆိုးတာကသူရဲ့အမျိုးသားအာမခံနံပါတ်ကိုစာလုံးပေါင်းတဲ့ alphabetti spaghetti ဖြစ်နေရင်။ gal ပြေးပါ။ သူကအရမ်းအိမ်စာအမှုကိုပြုပါတယ်။
သူသည်မိမိအဂျာကင်အင်္ကျီကိုချွတ်ယူသူအမှန်တကယ်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားပခုံးပေါ်မှာရပ်နေသုံးကလေးငယ်လေးဖွင့်သည့်အခါ 14.
ရုံ creepy ။
ကျွန်ုပ်မှာပါးစပ်နှင့် ဦး နှောက်တစ်ခုသင့်အားအဖြူရောင်ဝိုင်ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
၁၇။ သူတို့ကသူတို့ဖုန်းကို Camera Roll မှာထားတဲ့အခါမင်းဆီကနေဖုံးကွယ်ထားမယ်ဆိုရင်
Oop, သင်၏မျက်စိအဘို့မ! သူတို့ကင်မရာလိပ်ကိုလှိမ့်လိုက်တာနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသူတို့ Bumble မှာတွေ့ခဲ့သမျှမိန်းကလေးအားလုံးမှာအဝတ်အချည်းစည်းတွေရှိတယ်။
၁၉။ သူတို့ကသင့်ကိုသူတို့ ၀ ယ်ထားတဲ့ဒီအစားအသောက်အတွက်£ 2.30 ကိုပြန်ပေးဖို့ပြောရင်
Urmmmm ok၊ သင်ဒင်္ဂါးပြားယူသလား။
သူတို့ကပျားရည်ဆမ်းခရီးလွန်သွားလို့မရဘူး။ စာသားကမင်းကိုလှောင်ပြောင်ပြီးနောက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်မင်းကိုပစ်ချလိုက်တယ်။ သူတို့ကတစ်ခုလုံးကိုအချိန် Tinder, ပတ္တာနှင့် Bumble အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အခြေခံအားဖြင့် * ကတိကဝတ်ပြissuesနာတွေဟာအလံတစ်ခုဖြစ်တယ်။
၂၃။ သူတို့ထင်သောပုံပြင်များကိုတကယ်ဂန္ထဝင်ဟုပြောခြင်း (သို့သော်မဟုတ်)
၂၇။ လိင်ဆက်ဆံစဉ်သင့်နာမည်ကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောခြင်း၊ ထိုနေ့၌သူတို့သည်သင့်ကိုတွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်
တနည်းကား, လွန်ခဲ့တဲ့လေးနာရီနဲ့တူတွေ့ဆုံရန်မဟုတ်ခဲ့ ??
၂၈။ အကယ်၍ သူတို့သည်သင့်ကိုပထမ နေ့မှစ၍ လူမှုမီဒီယာတွင်သင်နောက်သို့လိုက်လျှင်
၂၉။ blowjob တစ်ခုအတွင်း၌သင်၏ခေါင်းကိုတွန်းခြင်း
မင်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးရှိမိန်းကလေးလိုမင်းငါ့ကိုအန်ချင်တာမဟုတ်ရင်ငါ့နှုတ်ထဲမှာမင်းရဲ့ဒစ်ထဲကိုထည့်ဖို့နေရာအလုံအလောက်မရှိဘူး။ သင်၏ရွေးချယ်မှု !!
၃၁။ သူတို့ဘယ်လောက်မူးယစ်ဆေးလုပ်တယ်၊ ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာကိုပြောတာ
Boomtown မှာ Ket လုပ်တာကိုငါတို့သဘောကျတယ်။
ရက်စွဲတစ်ခုမှာ 35. သူတို့တစ် ဦး စားပွဲထိုးသို့မဟုတ်စားပွဲထိုးရန်ရိုင်းစိုင်းပါပဲ
၃၆။ ပြောပါ - သင်သည်သက်သတ်လွတ်သမားမဟုတ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ Piers Morgan နဲ့ချိန်းတွေ့တာကိုမသိဘူး။
37 သင်၏လူမှုဘ ၀ တွင်သင်တင်ထားသောသင်၏ဘ ၀ အကြောင်းကိုတစ်ခုခုပြောပြသောအခါသူတို့ကကျွန်ုပ်သိသည်ဟုဆိုသော်လည်းသူတို့သည်သင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်သင်နောက်သို့မလိုက်ကြပါ
ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်ငါဒီညအသတ်ခံရတယ် !!
၃၈။ ပထမ ဦး ဆုံးနေ့တွင်သူတို့မည်မျှ ၀ င်ငွေရကြသည်ကိုပြောဆိုခြင်း
အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ဆံပင်နှင့် ပတ်သက်၍ အပျက်သဘောဆောင်သောထင်မြင်ချက်များ